rafozan-doza | Mey 2010 | 6
Teo ampanombohana lahatsoratra mikasika ny Pretoria II ah zany (a ne pas rater,, prochainement,, only on Fialamboly ) dia nibitsibitsika tamiko indray i Aphrodita, toy efa fanaony araka ny mahazatra. Tadidinareo ve le za hoe anandrana hanao annualism hanenjika ramatoa 51taona mandritra ny erin-taona. Dia hoe tsy rarahako na hoe grosssssssssss aza satria love is love... ny fitia tsy misy frontiera... androany aza dia ambarako aminareo fa nisy nanatanteraka ny redirediko. Encore mieux, tena ampisehoany tanteraka fa tsy misy fetra ny fitiavana.
Araka ny voalazan'ny soratra masina, Daily Telegraph, dia misy bandy kely 26 taona miaraka @ ramatoa be 72 taona. Aoka alou an, sao dia misy mitroatra sahady. The messed up part, out of control, more than the messed up part already is... drum roll... wait for it... zafikelin'le ramatoa le bandy. Ie, zanaky ny zanak'ilay ramatoa be le bandy kely Ndana alou midegoba doly ze te hidegoba rehetra Satria mbola tsy dia izay loatra no tena marikoriko. Kalou averina kely sao dia mbola misy tsy kopy eto: ramatoa be manao RS @ zafikeliny (in-3 isan-kerin'andro io an)... ao ve? midegoba kely indray ary alou e Marikoriko ambonin'zay dia... asio doboka amponga sy langraony kely hoe... endraso kely an... endraso wa... endrasoooooo... mikasa ny hiteraka ry zala
Bon, tsy secret tsony angamba ity fa efa fantam-poko fatam-pirenena hoe ra misy bandy mpinamana maromaro miaraka ka mahita vevavy metimety dia tsy maintsy hoe mankafy an'eritreritra an'le vevavy zay ry zalah ary probablement iny sipa iny foana no resahana mandrapahita sipa hafa ndray... mba lasa ihany ny saiko hoe in aza no tena hitan'le razoky refa mijery an'le rafotsy be izy? za manokana alou na hoe cougar fotsiny aza ka hoe tsy tsara entana tena tsy mahavita mi-undress mentalement ah. Tonga dia error code: access denied mazava be no mivoaka avy any... dia eritrereto hoe rafotsy be ve no eo anoloana, tsy tokony mba hoe omeo toerana voatokana fa dead woman walkin... sady izay bebeany marina fa hoe tsy nifankafantatra ry zareo fa zao vao nifankahita fa quand meme refa fantatra kosa ve dia mbola in ihany, eritrereto hoe bebeanareo burrrrrrrk nda midegoba ndray alou fa tsssssssssss okay double degoba, triple degoba
Dia hoe hiteraka a? bon efa menopause rafotsy alou fa hoe atao surrogate zany hoe maka atody any @ banky dia feconder-na @ sperma an'le bandy dia apetraka ao anatina kibon'olona... mampalahelo be le zazakely... satria sady ho zanaky le bandy no RAD-ny koa satria zanaky ny bebeany... indrindra moa rehefa ho jokotra le rafotsy... ngamba dia ho amboarin'le razoky ao koa ngambany aza hitako aza mahita ahy
Dia hanameloka azy ireo ve isika? izy alou tena tsy mirara eee, dikan-teny malalaka, avy @ rafotsy:
Tena mafinaritra tanteraka ny miaraka mipetraka aminy toy ny vadibe. Mahandro izy, manadio trano izy, ary manao RS in-3 isan-kerinandro zahay. Tena tsy mifankafoy mihintsy izahay roa.
Ho Ray mahafatra-po tokoa izy. Tsy mba nieritreritra izany mihintsy aho hoe ho "bevohoka" a 72 ans sy ho raiki-pitia @ zafikeliko. Tsy hiala-tsiny na @ iza na @ iza aho ary mino marimarina fa i A/tra no nanome anjara ahy fanindroany
ny any antsaiko voalou nefa dia hoe u f.ckin animals (!doty)... avy lesy aty hitadiavako sipa ela ra tena maina be fa aza dia rafotsy be no anaovana saovazy ao a
Rehefa atao ny fandinihana anefa dia hoy aho hoe ny fitiavana mihintsy no tsy manam-petra e. Ary didy faran'izay lehibe indrindra nomen'i Jesosy antsika izany . Satria nahoana tokoa moa izy no tsy hanana zo hikatsaka ny fahasambarana sy hanana taranaka? satria tsy tian'ny fiaraha-monina ve? fiainany izany fa tsy an'ny fiaraha-monina tsy akory. Sady na otran'ny hoe incest aza rehefa misy consentement sy hoe samy olon-dehibe, inona ny olana. Ny fitiavana no lehibe indrindra ka tsy tokony misy hidiran'ny pokona eo rehefa izy roa no mifanaraka. Efa izay no destin-ny sy nanaovan'Atra azy. Indray andro any izao mety hisy olona hitia robot, dia hanameloka azy ireo ve isika? love is love, moa ka tsy izany va?
ps: isaky ny miteny ah hoe tsy hanao lahatsoratra sexista sy hoe nimportekoi otran'itony tsony ah no misy signe avy an-danitra foana hoe io ndray letia aa... koa aza gaga ianareo ra hitranga afaka 6mois ny hoe... mitady sipa virjiny IV
05/01,2010 Sokajy Rediredy